Sh/hoose : AMISOM iyo Shabaab oo xaley hoobiyaal isku garaacey – idalenews.com
Sh/hoose : AMISOM iyo Shabaab oo xaley hoobiyaal isku garaacey
Wararka saaka naga soo gaaraya dhanka Gobalka Sh/hoose ee Koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa ay sheegayaan in xaley dagaalyahano ka tirsan Maleeshiyada Shabaab ay hoobiyaal kusoo weerareen fariisamo ciidamada Dowlada Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan Gobalkaasi.
Hoobiyaasha oo ahaa kuwo markii danbe ay is dhaafsanayeen Ciidamada AMISOM iyo kooxda Shabaab ayaa waxaa ay ka danbeysay markii ciidamo ka tirsan Shabaab Weerar Hoobiyaal ah ay kusoo bilaabeen Fariisinka cidamada Midowga Afrika ee AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Shalanbood.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in ciidamada AMISOM jawaabo kulul ay ka bixisey Hobiyaasha ay soo rideen Kooxda Shabaab ,hase ahaatee waxaa jira qasaarooyin kala duwan oo ka dhashey duqeynta xaley xaley Deegaanka Shalanbood ay isku dhaafsadeen labadaasi dhinac.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dhanka Xarakada Shabaab ee Soomaaliya iyo waliba saraakiisha ciidamada AMISOM oo ku aadan Hoobiyaasha xaley ay is dhaafsadeen Labadaasi ciidan,iyadoona maalmahan danbe shabaab ay kor dhiyeen weerarada ay ku qaadayaan Gobalka.
Iska horimaad hubeysan oo xalay ka dhacay magaalada Baydhabo
Nin shaley qarax ka geystay Baydhabo oo la qabtey